Welthungerhilfe: Arrimo ku-saabsan Welthungerhilfe – Welthungerhilfe Geeska Afrika
Welthungerhilfe waxay u heellan tahay la dagaallanka adduun gaajo la’aan iyadoo wax laga qabanayo sababaheeda. Siyaasad ahaan iyo diin ahaan, madaxbannaan, waxaan nahay mid ka mid ah hay'adaha gargaarka gaarka loo leeyahay ee ugu weyn Jarmalka.
Ficilladeenna waxay raacaan mabda'a 'caawinta iscaawinta' waxaana la waafajinayaa himilada horumarka Qaramada Midoobay ee waarta: 'Zero Hunger marka la gaaro 2030'. Annaga oo kaashanayna iskaashi dhaw oo lala yeelanayo la-hawlgalayaasha maxalliga ah, waxaan awood u siineynaa bulshooyinka inay ka baxaan gaajada iyo saboolnimada, oo leh saameyn la qiyaasi karo, daacadnimo iyo isla xisaabtan.
Laga soo bilaabo 1962, Welthungerhilfe wuxuu ka shaqeeyey 70 wadan oo ay weheliyaan ururada wadaniyiinta iyo kuwa caalamiga ah si ay dadka ugu suurtogeliyaan inay noloshooda xakameeyaan oo ay xuquuqdooda aadamiga ah ku helaan xaddiga waarid ahaan.37 dal.
Welthungerhilfe waxay xiriirisaa gargaarka, baxnaanin iyo waxqabadyo horumarineed oo muddada fog ah si ay u buuxiso baahiyaha gaarka ah ee dadka la tacaalma sababaha gaajada.
Waxaan si xoogan uga go'an nahay hufnaanta iyo maamulka tayada.Tallaabooyinka sida Xeerka Anshaxa ee loo yaqaan 'Welthungerhilfe' ee anshaxa, hanaanka maareynta tayada iyo warbixinteena sannadlaha ah waxay hubisaa in lacagta deeq-bixiyeyaasha ay saameyn ugu weyn ku leedahay bulshada aan la shaqeyno.
Madaxweyne kasta oo Jarmalka fadhiya wuxuu wakiil u ahaa sharafta Welthungerhilfe tan iyo markii la aasaasay ururka. Madaxweynaha Welthungerhilfe iyo xubnaha kale ee guddiga kormeerka waxay matalaan hay'adda dibedda waxayna la taliyaan Golaha Fulinta.Golaha Fulinta ee waqtiga-buuxa ayaa maareeya howlaha Welthungerhilfe.
Gudoomiyaha iyo xubnaha kale ee guddiga waxay raacaan qawaaniinta iyo qaraarada Golaha Welthungerhilfe ee Guud.Xubnaha waxaa ka mid ah Madaxweynaha baarlamaanka federaalka, madaxda kooxaha baarlamaanka Jarmalka, kaniisadaha, ururada ay weheliyaan kooxo kale.
Guddiga iskaa wax u qabso ee Ammaanada haya ayaa kala taliya guddiga kormeerka iyo guddiga fulinta su'aalaha xiriirka bulshada iyo suuq geynta halka guddiga latalinta barnaamijka uu mas'uul ka yahay su'aalaha la xiriira siyaasada barnaamijka.